Sida loo hagaagsan iPhone in New Computer oo aan laga badinin Music / Videos
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan iPhone in New Computer Dhammaataan
"Waxaan ku iibsaday laptop cusub daaqadaha 8 rakibay. Waxaan leeyahay iPhone 5 oo Waxaan isku dayayaa inaan u hagaagsan iPhone in computer cusub. Markii aan ku xidhi aan iPhone 5 la laptop cusub, Lugood i siiyo farriin ah in Lugood saari doonaa wax walba oo ku saabsan my iPhone leh waxa ku Sugan Lugood Library, taas oo aan waxba. Anigu ma fahmi karaa sida ay u hagaagsan iPhone la computer cusub oo aan laga badinin xogta. Fadlan caawi. Thanks. "
Sida user iPhone ah, haddii aad isku daydo in aad u hagaagsan iPhone in computer cusub, aad music, filimada, bandhigyada TV, buugaagta, iyo codadka on iPhone laga saari doonaa. Waxa uu lid ku ah rabitaanka. Haddii aad rabto in aad u hagaagsan iPhone la computer cusub oo aan laga badinin muusig iyo cajallado fiidyow, halkii Lugood, waxaad isku daydaa inaad TunesGo Wondershare. Waxay kuu ogolaanaysaa music u hagaagsan, videos, playlist, iwm ka iPhone in Lugood Library computer cusub. Markaasay ka dib, waxaad u hagaagsan kartaa iPhone la Lugood Library computer cusub oo aan laga badinin songs dilaaga ama videos.
Isku day TunesGo Wondershare si hagaagsan iPhone in computer cusub!
Fiiro gaar ah: Labada Wondershare TunesGo iyo Wondershare TunesGo (Mac) ayaa dhamaantood laga heli karo. Hadda Wondershare TunesGo taageertaa music, videos, iyo playlist gudbaayo Lugood Library iyo computer labadaba. Iyadoo Wondershare TunesGo (Mac) oo kaliya ogolaanaysaa users music ka iPhone wareejiyo Lugood Library, xulay songs, videos, iyo sawiro in computer Mac. Hoos waxaan ka hadlaan sida ay u hagaagsan iPhone in computer cusub oo ku saabsan Windows PC.
Download, rakibi, oo ay maamulaan TunesGo Wondershare on Windows PC. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan iPhone la PC. TunesGo ogaan doonaa iPhone iyo muujiyo info uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta hagaagsan iPhone in computer cusub TunesGo, fadlan hubi aad ku rakiban Lugood aad kombuutarka. Kaliya la Lugood lagu rakibay, TunesGo shaqeyn doonaa si sax ah.
Tallaabada 2. nidaameed iPhone Music, Videos, iyo playlist in computer cusub
Nidaameed music iyo videos ka iPhone cusub computer
Click Media dhinaca bidix ee suuqa hoose. Laga soo bilaabo suuqa kala cusub, waxaad ka arki kartaa, waxaa jira dhowr tabs: Music, telefoonnada gacanta, TV muujinaysaa, Music Videos, Podcasts, Lugood U, buugaag. Riix tab kasta siday u kala horreeyaan, dooro files doonayo, guji " Dhoofinta in Lugood Library "ka" Dhoofinta in "menu on sare ee daaqadda.
Nidaameed iPhone playlist in computer cusub
Guji " playlist "dhinaca bidix ee suuqa hoose. Laga soo bilaabo suuqa kala playlist, dooro doonayay playlist iPhone oo guji " Dhoofinta in Lugood Library "ka" in dhoofinta liiska hoos-hoos ".
Maxaad u dooratay " Dhoofinta in Lugood Library ", ma" Dhoofinta in aan computer "? Haddii aad doorato " Dhoofinta in Lugood Library ", ka dibna aad music, filimada, TV muujinaysaa, iwm wareejiyo Lugood Library on your computer. Marka xiga, marka aad u hagaagsan Lugood aad iPhone, files waxaa loo gudbin doonaa iPhone, overwriting kuwa asalka ah. Xaaladdan oo kale, faylasha, kuwaas oo wali ku jira aad iPhone.
Waxaan aad u ma xaqiijin karo iPhone in hagaagsan in computer cusub oo aan laga badinin wixii xog ah, sababtoo ah TunesGo hadda ma taageeri buugaagta weli. Waxa kaliya ee, waxaan hubin waa in aan aad waayi doonaa wax songs dilaaga iyo videos ka iPhone halka u hagaagsan iPhone la computer cusub TunesGo Wondershare.
Daawo Video ah in ay bartaan sida ay u hagaagsan iPhone in Computer New